Translucent Powder တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ? (အပိုင်း ၂) | CosmeticMyanmar
Home » Article » Translucent Powder တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ? (အပိုင်း ၂)
Translucent Powder တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ? (အပိုင်း ၂)
မျက်နှာအဆီမပြန်စေဖို့ထိန်းပေးတဲ့ Translucent Powder လေးတွေက မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းဖို့တင်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားနေရာတွေမှာလည်းအသုံးတည့်တယ်ဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးမှာမို့ ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြရအောင်လေ။
၁။ Mascara ကိုပိုပြီးကြာရှည်ခံစေဖို့
Mascara ကိုခပ်ထူထူဆိုးတော့မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကြာရှည်ခံစေဖို့ မျက်တောင်မကော့ခင်မှာ eyeshadow brush နဲ့ မျက်တောင်ပေါ်ကို translucent powder လိမ်းပေးပြီးမှ mascara ကို နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ် ထပ်ဆိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ Eyelid Primer
မျက်ခွံပေါ်ကို eyeshadow ဆိုးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် eyeliner ဆိုးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်ခွံပေါ်မှာအဆီပြန်နေတာမျိုးဆိုအဆင်မပြေပါဘူး၊ ဒါကြောင့် မျက်ခွံပေါ်ကို brush သေးသေးထူထူလေးနဲ့ translucent powder လိမ်းပေးထားသင့်ပါတယ်။
၃။ မိတ်ကပ်အမှုန်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့လိုတဲ့အခါ
Eyeshadow ကိုသုံးပြီးအရောင်လေးတွေမျိုးစုံချယ်ရတာလှပေမယ့် shadow ကအမှုန်လေးတွေများ မျက်လုံးအောက်နဲ့ပါးပေါ်ကိုကျလို့ဖယ်ရင်းနဲ့ အမှုန်တွေပိုပြန့်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်ရအောင် translucent powder ကိုမျက်လုံးအောက်နဲ့ ပါးရိုးတစ်လျှောက်ကြိုလိမ်းပေးထားပြီး eyeshadow သုံးပြီးတဲ့အခါမှာ brush နဲ့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူဖြစ်စေမှာပါ။
၄။ Concealer သုံးတဲ့အခါ
Cream type Concealer တွေကိုသုံးတဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်မှာ တစ်ခါတစ်လေ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်သလို လိုင်းတွန့်(crease) တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် concealer အပေါ်ကနေ translucent powder လေးထိပ်အုပ်ပေးပြီး အရေးအကြောင်းမရှိသဘာဝဆန်ဆန်နဲ့လှနေစေနိုင်ပါတယ်။
Image resource – www.etudehouse.com
Tags: beauty tipstranslucent powder